Ciidamada maamulka Juba iyo Amisom oo dagaal kula wareegay deegaanka Kudhaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada maamulka KMG ah ee Jubba iyo kuwa AMISOM ay maanta la wareegeen deegaanka Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose iyo deegaanno kale kaddib markii ay maanta weerar ku qaadeen deegaannadaasi.
Ciidamada Huwanta, ayaa iska caabin xoogan waxay kala kulmeen dagaal-yahanada Al Shabaab, oo isku deyay inay difaacdaan gacan ku haynta deegaanka Kudhaa, inkastoo markii dambey ay deegaanka la wareegeen ciidamada huwanta ah.
Ciidamada Huwanta, ayaa waxay laba jiho ka galeen deegaanka Kudhaa, iyagoona isku ballaariyay qaybaha kala duwan ee deegaankaasi.
Afhayeenka Maamulka KMG ah ee Jubba C/naasir Seeraar Maax, oo la hadlay Warbaahinta wuxuu xaqiijiyay in Ciidamada Huwanta ay si buuxdo ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Kudhaa.
Afhayeenka wuxuu xaqiijiyay in dagaalka ay ku dileen ugu yaraan afar ka mid ah dagaal-yahanada Al Shabaab, iyadoo uu ka gaabsaday khasaaraha dhankooda ka soo gaaray dagaalkaasi.
Deegaanka Kudhaaw ayaa qiyaastii 30 KM dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo, waxaana la wareegitaanka deegaankaas kusoo beegmay xilli labo todobaad ka hor sidan oo kale ciidamada huwanta ah ula wareegeen deegaanka Buul Guduud oo 30 KM dhanka woqooyi kaga beegan Kismaayo.